မမျှော်လင့်ဘဲအချစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ။ မင်းမှာမမျှော်လင့်တဲ့အချစ်ရှိရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် ယေရှု၌နှစ်သိမ့်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်ကိုရှာပါမရ။ ဘုရားသခင်သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောအစီအစဉ်ရှိသည်။ မင်းဂရုစိုက်တဲ့သူကအစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအဆုံးမဟုတ်ဘူး။
မလိုလားသောအချစ်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ မိဘများနှင့်ကလေးများ၊ ညီအစ်ကိုများ၊ ခင်ပွန်းများနှင့်ဇနီးများနှင့်ရင်ခုန်စရာအချစ်များ။ မလိုလားသောအချစ်၏နာကျင်မှုကိုဘုရားသခင်နားလည်သည်။ သူသည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ချစ်သည် infinito ချစ်သည်၊ သို့သော်လူများစွာသည်သူတို့၏အချစ်ကိုငြင်းပယ်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏အစိတ်အပိုင်းအသီးသီး၌ဘုရားသခင်သည်သူမ၏မေတ္တာအားလုံးကိုပေးခဲ့သော်လည်းဇနီးသည်ကငြင်းပယ်ခံရသောခင်ပွန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏မေတ္တာကိုကမ်းလှမ်းရန်အရှုံးမပေးပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့အကြောင်းပြောကြမယ် တစ်ကိုယ်တည်းသမားများအကြားမမျှော်လင့်သောအချစ်ရေးမရ။ မင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကိုဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဘဲ။ အချစ်ကအပြန်အလှန်တော့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းမှာဆက်ဆံရေးမရှိနိုင်ဘူး။
1.1 ၁။ ခဏလောက်ဝေးဝေးနေပါ
1.2 ၂။ ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေး၌ခွန်အားကိုရှာပါ
1.3 ၃။ အခုအချိန်မှာကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသတိထားပါ
2 တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းမခံစားရရင်ဘာဖြစ်မလဲ။
မင်းရဲ့အချစ်ကိုမမျှော်လင့်ဘဲတွေ့လိုက်တဲ့အခါပထမဆုံးခြေလှမ်းက ထိုအချက်ကိုလက်ခံပါ. မင်းကိုဘယ်သူကမှမချစ်နိုင်ဘူးမရ။ ဘုရားသခင်တောင်မလုပ်ဘူး! မင်းရဲ့အချစ်ကိုကမ်းလှမ်းပြီးတစ်ဖက်လူတုံ့ပြန်ဖို့ကိုသာစောင့်နိုင်တယ်။ မဟုတ်ရင်မင်းရမယ် အဲဒီလူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပါ။
မင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ မဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ မင်းဂရုစိုက်တဲ့သူကမင်းသူတို့နဲ့မပေါင်းချင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြရင် သူမကိုလိုက်မနေပါနဲ့မရ။ ဒါကမင်းကိုသာနာကျင်စေလိမ့်မယ်။ သင်တို့နှစ် ဦး အတူတကွရှိမှသာဆက်ဆံရေးတစ်ခုအလုပ်လုပ်သည်မရ။ မင်းရဲ့ဘ ၀ နဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ်။ ပြီးတော့ပထမခြေလှမ်းကလက်ခံဖို့ပါ။
အာမုတ် ၃: ၃
သမ္မာကျမ်းစာကဤသို့ဆိုသည် အချစ်သည်စိတ်ရှည်သည်၊ ကြင်နာသည်၊ သူ့အကျိုးစီးပွားကိုမရှာပါမရ။ မင်းရဲ့အချစ်ကိုအလျှော့မပေးတဲ့အခါအဲဒီလူအတွက်မင်းအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားဖို့နဲ့အရှက်ရမှုကိုရှောင်ဖို့ပါပဲ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ပါနဲ့၊ သင်၏အကွာအဝေးကိုထားပါ။
အချစ်သည်စိတ်ရှည်သည်၊ နူးညံ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မနာလိုစရာမဟုတ်၊ မေတ္တာသည်ဝါကြွားခြင်းမရှိ၊
သူသည်မသင့်လျော်သောအရာကိုမလုပ်၊ မိမိကိုမရှာ၊ ဒေါသမထွက်၊ အာaာတမထား။
ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အချစ်တွေကမမျှော်လင့်ဘဲနာကျင်စေတယ်ဆိုတာသိမြင်ခြင်းက သင်၏နှလုံးသည်ကုသရန်အချိန်လိုအပ်သည်မရ။ မင်းရဲ့အချစ်ပန်းတိုင်နဲ့အရမ်းနီးစပ်တာကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခက်ခဲစေတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ဖို့မလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီလူနဲ့အရမ်းမနီးစပ်အောင်ရှောင်ပါ။ အထူးသဖြင့်အစပိုင်းတွင်
မင်းကအရမ်းချစ်တာဘဲ၊ မင်းရဲ့ဘဝကိုဘယ်သူမှပြီးအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးဆက်ဆံရေးကယေရှုနဲ့ပါ။ မင်းကိုနှစ်သိမ့်ဖို့နဲ့မင်းရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ပေးဖို့ယေရှုအလိုအပ်ဆုံးအချိန်ကဒီလိုအချိန်ဘဲ။
ယေရှု၌သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အပြန်အလှန်ပေးဆပ်ခြင်းထက်ပိုများသည်။ သူဟာမင်းကိုဘယ်တော့မှစိတ်မပျက်စေတဲ့သူပါ။ အချိန်တိုင်း၊ ယေရှုသည်အမြဲရှိနေပြီးသင့်ကိုကူညီရန်တန်ခိုးရှိသည် မမျှော်လင့်သောအချစ်၏နာကျင်မှုကိုကျော်ဖြတ်ရန်။
မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတာဘုရားသခင်သိတယ်။ မင်းရဲ့အချစ်ကိုမစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမင်းဘဝအတွက်အခြားအစီအစဉ်တွေရှိတယ်။မရ။ မင်းရဲ့အလိုတော်ကိုလက်အောက်ခံပြီးမင်းရဲ့ဘဝမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်ဖို့ဆုတောင်းပါ.
အကြောင်းမူကား၊ ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ တရားမျှတမှုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏။
မင်းရဲ့အချစ်ကဆန္ဒမပြည့်ဝတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခုကိုသင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမိုက်မဲတဲ့အရာတစ်ခုလုပ်ဖို့လုပ်ဖို့သွေးဆောင်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်။ တစ်ချို့အရာတွေက NO ကြေကွဲနှလုံးနာကျင်မှုကိုဖြေရှင်းရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမှာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရည်စူး မင်းရဲ့အချစ်ကိုလိုက်ရှာ မပြည့်စုံ။
ကိလေသာဝေဒနာ၌သင်၏စိတ်သည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အစွန်းရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ ၎င်းသည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်အချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ မင်းစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အထိစောင့်ပါ။ ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အလျင်လိုမနေပါနဲ့.
သို့သော်အရူးအမူး ၀ င်လာသောသူတိုင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့မုချရောက်သွားသည်.
သုတ္တံ ၂၂: ၆
အခြားတစ်ယောက်အတွက်သင်ဒီလိုခံစားစရာမလိုပါဘူး။ ပိုကောင်းတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုပဲခံစားဖို့အတင်းကြိုးစားတာထက်ရိုးသားပါ။ မရိုးသားသောဆက်ဆံရေးသည်မစခင်သေဆုံးသည်။ မင်းကမလိုချင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလို့မင်းထင်ရင်မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတခြားသူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ ဒါကမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘဲ၊ မင်းကိုမချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းသင်းဖို့ဘယ်သူကမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။
မမျှော်လင့်ဘဲအချစ်ကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာဒီဆောင်းပါးကမင်းနားလည်ဖို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိလိုလျှင် အကြမ်းဖက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်အညီမည်သို့ပြုမူပုံကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ Discover.online ။